Chishamiso chaJesu Chokutanga | Upenyu hwaJesu
JESU ANOSHANDURA MVURA KUITA WAINI
Rava zuva rechitatu kubvira pakatanga kusangana Natanieri naJesu achiva mumwe wevadzidzi vake vokutanga. Jesu nevamwe vevadzidzi ivavo vanoenda kuchamhembe kuruwa rweGarireya, kumusha kwavo. Vanosvika muguta riri muruwa irworwo rinonzi Kana, kunobva Natanieri. Guta reKana riri mumakomo nechekuchamhembe kweNazareta, kunova ndiko kwakakurira Jesu. Vakakokwa kumuchato ikoko.
Amai vaJesu vauyawo kumuchato. Sezvo Mariya ari shamwari yemhuri dzine vari kuchata, anofanira kunge ari kumiramira kubatsira vanhu vakawanda varipo. Saka anokurumidza kuona kuti pane chapera, obva audza Jesu kuti: “Havasisina waini.”—Johani 2:3.
Nemashoko aya Mariya ari kuedza kuudza Jesu kuti aone zvokuita nenyaya yewaini yapera. Achishandisa matauriro anoitwa mumutauro mavo kana munhu achiramba, Jesu anoti: “Ndinei newe iwe mukadzi?” (Johani 2:4) SaMambo akasarudzwa naMwari, Jesu anomirira kuudzwa zvokuita naBaba vake vokudenga, kwete nevemumhuri neshamwari. Mariya anobva asiyira nyaya yacho mumaoko memwanakomana wake, achingoti kuvaya vari kuona nezvewaini: “Itai zvinhu zvose zvaanokuudzai.”—Johani 2:5.
Pane makate matanhatu, rimwe nerimwe richikwanisa kutakura marita anopfuura 40. Jesu anoudza vari kuona nezvewaini kuti: “Zadzai makate acho nemvura.” Anobva ati: “Chiicherai muende nayo kumutungamiriri wemabiko.”—Johani 2:7, 8.
Mutungamiriri wemabiko anofadzwa nemanakiro ari kuita waini yacho asi haasi kuziva nezvechishamiso chaita kuti ivepo. Anodana murume ari kuchata oti kwaari: “Vamwe varume vose vanotanga kubudisa waini yakanaka kwazvo, uye vanhu pavanenge vadhakwa, vanobudisa isinganaki. Iwe wachengeta waini yakanaka kwazvo kusvikira zvino.”—Johani 2:10.
Ichi ndicho chishamiso chaJesu chokutanga. Vadzidzi vake, avo vachiri vatsva, pavanoona chishamiso ichi, kutenda kwavo maari kunosimbiswa. Achibva ipapo, Jesu, amai vake, nevanun’una vake vanoenda kuguta reKapenaumi kuchamhembe kwakadziva kumavirira kweGungwa reGarireya.
Muchato wekuKana unoitika riini muushumiri hwaJesu?
Jesu anopindura sei amai vake pavanotaura naye nezvewaini?
Jesu anoita chishamiso chipi, uye izvozvo zvakabatsira sei?